Champ League Archive - Gool FM - page 2	twitter
Laacibka kooxda Man City ee David Silva oo noqday xiddigii 25-aad ee Spain oo…
(Monaco) 16 Maajo 2017 – Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester City ayaa isagoo xiran calaamada hoggaaminta kooxdiisa Sky Blue lagu soo bilaabay safka hore kulankii Champions League ee ay caawa kooxdiisu guuldarrada kala kulantay naadiga Monaco.
Kooxda Monaco ayaa 3-1 ku garaacday Man City lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League, waxaana ciyaartan uu Silva saftay kulankii 50-aad ee koobka horyaallada Yurub.
David Silva oo caawa saftay kulankiisii 50-aad ee Champions League ayaa sidaas ku noqday xiddigii 25-aad ee Spain ah 
Atletico Madrid oo u gudubtay siddeed dhammaadka Champions League kaddib barbaro ay la gashay kooxda Bayer Leverkusen… + SAWIRRO
(Madrid) 16 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa dhammaystirtay siddeeda kooxood ee u soo baxay siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub kaddib barbaro ay garoonkeeda Vicente Calderon kula gashay Bayer Leverkusen.
Kulankan ayaa inkastoo la isku helay fursad goolal loo filan karay labada dhinaca qeybtii hore, haddana ma aysan dhicin inay shabaqa gaaraan waxaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta wax badan iskama bedelin kulanka kooxda Atletico ayaana difaaceeda 
CL: Kooxda Monaco oo u soo baxday siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub markii ay reebtay Manchester City… + SAWIRRO
(Monaco) 16 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Monaco ayaa u soo baxday siddeed dhammaanka Champions League kaddib markii ay guul ka gaartay 3-1 ka gaartay caawa naadiga Ingiriiska ee Manchester City.
Monaco ayaa goolasha la horreysay waxaana goolka koowaad u dhaliyey 8’daqiiqo bilowgii ciyaarta da’yarkooda Kylian Mbappe Lottin, kaddib markii uu shabaqa gaarsiiyey kubbad uu Bernardo Silva u soo dhigay Man City ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Inta aan la aadin qeybta nasashada Man City ayaa laga dhaliyey goolka labaad waxaana 29’daqiiqo 
WARBIXIN: Goorma ayaa la sameynayaa isku aadka sideed dhammaadka Champions League, imise koox ayaa soo baxay, goormaase la ciyaarayaa???
(Europe) 15 Mar 2017. Champions League ayaa soo gaaray meelihiisii ugu xiisaha badnaa iyadoo caawa la sugayo cidda ka soo baxda Man City iyo Monaco oo is haya iyo Leverkusen oo wajaheysa Atletico Madrid si uu u dhammeystirmo 8-da kooxood ee ciyaaraya wareega sideeda.
Ilaa iminka 6-kooxood ayaa xaqiiqsatay booskooda quarter-final, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Dortmund iyo Leicester City.
Haddaba goorma ayaa la sameynayaa isku aadka wareega sideed dhammaadka Champions League?
Waxaa la sameyn doonaa maalinka jimcaha ah marka ay saacada 
HORDHAC: AS Monoco Vs. Manchester City
(Monoco) 15 Mar 2017. Manchester City waxa ay booqan doontaa AS Monoco lugta labaad ee wareega 16ka Champions League-ga.
City bar bar dhac ayaa ugu yaraan laga rabaa wallow Monoco halisteedu yareyn.
Maxaa ka cusub City?
– Vincent Kompany shaki ayaa ku jira taaam ahaanshihiisa halka ay dhaawacan yihiin Gabriel Jesus iyo Ilkay Gundogan
-Pep Guardiola koox difaaaceed in uu la yimaado ayey u badan tahay taas oo ka dhigan keydka in uu u dhoco Kevin De Bruyne halka ay dhexda iska kaashan doonaan Fernandinho 
“Haddii aan ku guuleysan weyno Premier League waxay la mid noqoneysaa sheekadii PSG ka qabsatay Barcelona.” Eden Hazard
(London) 13 Mar 2017. Eden Hazard ayaa wal wal ka qaba Premier League xilli ay kooxdiisa ku hogaamineyso 10-dhibcood oo nadiif ah isla markaana uu horyaalka ka harsan yahay 11-kulan oo qura.
Xiddiga reer Belgium ayaa tusaale u soo qaatay jabkii PSG ka soo gaaray Barcelona tartanka Champions League xilli ay garoonkooda ku soo adkaadeen 4-0 balse loogu jawaabay 6-1.
“Waad aragtay wixii ka dhacay Camp Nou,” Hazard ayaa sidaa yiri.
“Haddii aan ku guuleysan wayno horyaalka xilli ciyaareedkan waxaan u maleynayaa waa 
Radamel Falcao oo shaki laga muujinayo inuu taam u noqon karo Kulanka Man City
(Monaco) 12 Maarso 2017 Kooxda AS Monaco ayaa helaysa war aan fiicnayn kadib markii shaki laga muujiyay taam ahaanshaha weerar yahankooda reer Colombia.
Falcao ayuu dhaawac ka soo gaaray bowdada kulankii kooxdiisu ay 2-1 uga adkaatay xalay kooxda Bordeaux, waxaana shaki lagaliyay inuu ciyaari karo kulanka Manchester City.
Kooxda reer France ayaa 5-3 looga soo adkaaday kulankii lugta hore, waxayna ku dadaalayaan inay u soo gudbaan wareega 8-da.
Tababare Leonardo Jardim oo la waydiiyay xaalka Radamel Falcao kadib kulankii xalay ayaa yiri:
“Jug culus ayaa ka soo 
Klopp oo sheegay in kooxdiisu aysan u qalmin ka ciyaarida Champions League
(Liverpool) 11 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sheegay in kooxdiisu aysan u qalmin ka ciyaarida koobka horyaalada yurub.
Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in kooxdiisu aysan sifiican ugu diyaarsanayn tartanka qaarada yurub wuxuuna sii raaciyay in sidaas darteed aysan tabayn koobka horyaalada yurub.
“Ma tabayno ka qayb qaadashada Champions League, waayo waxaan ogahay in aanaan u fiicnayn sidii larabay si aan ugu tartano yurub” ayuu yiri Jurgen Klopp.
“Dabcan, u soo bixida Champions League gacanteena ayeey ku jirtaa, waqtigaan la joogo waa inaan 